मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी छु : देवीलाल भण्डारी
स्याङजामा जन्मिएका देवीलाल भण्डारी पन्ध्र वर्षदेखि जापानमा बस्दै आइरहेका छन् । जापान प्रवेश पछि देवीलालको जीवनले थुप्रै उतारचढाव पार गरे । विभिन्न व्यवसायमा आवद्ध रहेका देवीलाल राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यमा उत्तिकै सक्रिय छन् । उनले जीवनमा संघर्ष के हो ? जापानमै आएर बुझेका थिए । यही संघर्षले नै देवीलाललाई गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको बरिष्ठ उपाध्यक्षसम्मको यात्रा डो¥यायो ।
देवीलाललाई आगामी २०१९–२०२१ को कार्यकालको लागि गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको निर्वाचनमा अध्यक्षको प्रत्यासीको रुपमा हेरिएको छ । मिहेनती र सहयोगी स्वभावका देवीलालले जापानमा रहेर नेपालीहरुको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
देवीलाल कुशल समाजसेवी र सामाजिक अभियन्ता पनि हुन् । उनले एक पटक संयोजक र एक पटक सहसंयोजक रहेर दुई पटक जापानको राजधानी टोकियोमा नेपाल फेस्टिवल भब्य रुपमा सम्पन्न गरिसकेका छन् । समसामयिक विषयमा देवीलाल भण्डारीसँग राम तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश –
आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
नियमित व्यवसायीक कार्यमै व्यस्त छु भन्नु प¥यो । चुनावको चटारो पर्न लागेकोले साथीभाइहरुसँग भेटघाटमा पनि व्यस्त छु ।
प्रवासमा रहेका नेपालीहरुका पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएको छ ? के कस्ता कठिनाईहरु भोग्नु परिरहेको छ ?
सामाजिक कार्य मेरो रुचीको विषय हो । त्यसैले म जापानमा व्यवसाय गरेर बसे पनि जापानमा रहेका नेपालीहरुलाई सरसहयोग गर्दै आइरहेको छु । प्रवासमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु आइपर्छन् । कानुनी, सामाजिक, व्यावसायिक अड्चनहरु धेरै आइपर्छन् । यस्तो समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई सहयोग गर्न पाउँदा एकदमै खुसी छु । जस्तै, कानुनी विवाह, दुर्घटना, निधन, व्यवसाय स्थापना जस्ता विषयमा धेरै बाधा र अड्चनहरु देखापर्छन् ।
तपाईं राजनीतिमा पनि आवद्ध हुनुहुन्छ नि ?
हो, सन् २००८ मा म गैरआवासीय नेपाली संघ जापानमा आवद्ध भएँ । कार्यसमिति सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष अनि अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतमा छु । जापानमा रहेका नेपालीहरुको साथ र मायाले यो हैसियतमा आइपुगेको हुँ । जापनमा रहेका नेपालीहरुले अध्यक्षका लागि आगामी निर्वाचनमा भाग लिन दवाब पनि दिइराख्नु भएको छ । वहाँहरुको मायाको सम्मान खातिर आगामि निर्वाचनमा अध्यक्षको लागि चुनाव लड्ने विचार गरिरहेको छु ।
शुरुमा जापान आउँदाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
जापान एउटा संघर्षशील मुलुक हो । हरेकको मनमस्तिष्कमा जिम्मेवारीको बोध हुन्छ । मैले जापानमै आएर संघर्ष के हो बुझेको हुँ । काम गर्न सक्ने उमेरदेखि उमेर ढल्किदासम्म जापानमा मानिसहरु काममा तल्लीन हुन्छन् । परिश्रमको मूल्याङ्कन पनि हुन्छ यहाँ । हरेक क्षेत्रमा सरकारको निगरानी रहेको हुन्छ यहाँ । स्रोत साधनको उचित परिचालन, नागरिक कर्तव्यको पालना, जिम्मेवारीबोध, नियम कानुनको पालनाजस्ता कारणले गर्दा जापान विकसित मुलुकमा गनिन्छ । हरेक मानवीय क्रियाकलापमा सचेत रहने जापानी संस्कारले यहाँ रहने सबैलाई त्यस्तै संस्कारको पालना गर्ने बनाएको छ ।
जापानमा नेपालीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालीहरुको अवस्था सामान्य नै छ भन्नु पर्छ । अहिले धेरै नेपालीहरु छन् जापानमा । नेपाली भन्ने वित्तिकै एक किसिमको आत्मीयता छ यहाँ । गाह्रो अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सहयोग गर्न सबै अगाडि आउँछन् । जापानमा विद्यार्थी भिषामा आउने नेपालीहरुको संख्या सबैभन्दा बढी छ । जापानका प्रमुख शहरहरु टोकियो, ओसाका, फुकोवाका र नागोयामा नेपालीहरु धेरै छन् । व्यावसायिक भिषामा रहने नेपालीको संख्या पनि उल्लेख्य छन् । अन्य मुलुकहरुमा जस्तो रोजगारी नै नपाएर बाटोमै सुत्नु पर्ने अवस्था देख्दिन यहाँ । संघर्ष भने अलि धेरै गर्नुपर्छ र आम्दानी पनि राम्रै छ । कामप्रति नेपालीहरु अन्यभन्दा बढी सजग, जिम्मेवार, मेहनती छन् ।
व्यावसायीक कठिनाईहरु के कस्ता छन् ?
व्यावसाय गर्नकै लागि त कठिनाईहरु त्यति छैनन् । तर, व्यवसाय सञ्चालनका लागि पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया अलि जटिल छन् यहाँ । सामान्य आम्दानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न गाह्रो छ । विदेशी नागरिकका लागि जापानले छुट्टै व्यवसायीक मापदण्ड तोकेको छ । यो मापदण्ड अनुरुप व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कानुनी जटिलता आइपर्न सक्छन् ।
नेपाल र जापान बीच के भिन्नता पाउनु भयो ?
धेरै कुरामा भिन्नता छन् । सर्वप्रथम त यहाँको संस्कार नै फरक छ । मेरो मतलव जापानी नागरिकको सोचाई, उनीहरुको अनुशासन, सरकारको दृष्टिकोण, कामप्रतिको आदर, विकासका कुरा जस्ता हरेक पक्षमा भिन्नता छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधारमा जापानले धेरै फड्को मारिसकेको छ । यो सबै जापानी नागरिकको कामप्रतिको प्रतिबद्धताका कारण सफल भएको जस्तो लाग्छ मलाई । जापानीहरु कामलाई सम्मान गर्छन् । हामी नेपाली भने आफ्नो देशमा छिछि दुरदुर गर्ने कामहरु विदेशमा गएर गर्न तमतयार छौं । त्यही नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । विकासको पहिलो पाइला नै रोजगारीको सम्मान हो । सरकारको नीति र क्रियाकलापमा पनि धेरै भिन्न छन्, नेपाल र जापानमा । सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुनु नेपालको सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो । सर्वप्रथम सोँच र संस्कार बदल्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई । जापानका नागरिक धेरै संघर्षशील छन् । नेपालीहरु दैनिक तीनदेखि चारघण्टा समय खानामा व्यतित गर्छन भने जापानीहरुको औसत समय एकघण्टा हुन आउँछ । अन्य समय काममै व्यस्त हुनुपर्छ जापानमा ।
जापानमा रहेका नेपालीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
जापानमा धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँको संस्कार नै त्यस्तै छ । प्रवास भएका कारण हामीलाई सरसहयोग गर्ने हामी नै हो । सुखदुःखमा नेपालीहरु नै अगाडि आउनुपर्छ ।
नेपाल सरकारबाट कस्तो अपेक्षा राख्नुहुन्छ ?
जापानमा रहेका नेपालीहरुलाई समस्या परेमा नेपाल सरकारले तत्काल एक्शन लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपालमै राम्रो शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी, पूर्वाधार भइदिएको भए प्रवास आउनु पर्ने थिएन । नेपालीहरु आफ्नै माटोमा रमाएर जीवन बिताउन सक्थे । सरकारको यो कमजोरीका कारण दैनिक नेपाली युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसले देशमा नै बे्रनड्रेनको समस्या सिर्जना भइरहेको छ । आर्थिक रुपमा पनि उत्तिकै नोक्सानी पु¥याइरहेको छ । सरकारले यी आवश्यक पूर्वाधारहरु समयानुकुल तयार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
तपाईलाई गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको भावी अध्यक्षका रुपमा हेरिएको छ । भावि योजनाहरु के कस्ता छन् ?
– प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरुको विश्वास र मायाले नै म अहिले बरिष्ठ उपाध्यक्ष छु । उहाँहरुले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी छु, ढुक्क छु । मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको प्रवासी नेपालीको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने संरचना विकास गर्ने हो । प्रवासी नेपालीप्रति सरकारको ध्यान न्यून गएको देखिन्छ । सरकार र प्रवासीबीचको निकटता घनिष्ट बनाउनका लागि म सधै लडिरहने छु ।
कांग्रेसभित्र पेचिलो बन्दै हिन्दु राष्ट्र पुर्नस्थापनाको मुद्दा
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग
प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आज सिंगापुर जाँदै
सैनिक भर्नामा अनियमितता : भर्ना छनौटमा कडा नीति